Posted by: युगबोध in सम्पादकीय May 20, 2019	0 83 Views
पाँच नं. प्रदेश सरकारले महामानव गौतम बुद्धको २५६३ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ शुभारम्भ गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भव्य समारोहका बीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिले कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएकोले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भए पनि केन्द्रको प्राथमिकताभित्र परेको प्रष्ट भएको छ। यसले केन्द्र सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष र प्रदेश सरकारको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको सन्देश दिएको छ।
लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना ४१ वर्ष अगाडि शुरु भएको हो। यो काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ। अब दुई वर्षभित्र गुरुयोजनाले पूर्णता पाउने लक्ष राखिएको छ। यो काम सम्पन्न भएपछि लुम्बिनीको विकास विश्वकै लागि अनुपम र उदाहरणीय हुनेछ। विगत केही वर्षयता थाइल्याण्डलगायतका विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरुले लुम्विनीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन्। बौद्ध धर्म अँगालेका विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्ना भौतिक संरचना मार्फत् लुम्बिनीको गौरब बढाउने काम गरेका छन्। यसबाट लुम्बिनीको विकासमा विदेशी राष्ट्रहरुको चासो र अग्रसरता प्रष्ट हुन्छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरकै बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएकोले आगामी दिनमा लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकहरुको चाप अझ बढ्ने निश्चित छ। यस वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी २० लाख पर्यटक लुम्बिनीमा ल्याउने योजना पाँच नं. प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। तर लुम्विनी भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न पर्यटक भिœयाएर मात्रै पुग्दैन, उनीहरुलाई राम्रो आतिथ्यता दिएर बसाइ लम्ब्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि उच्चस्तरका होटल स्थापना र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
पाँच नं. प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन, कृषि र उद्योग हो। औसत प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा पाँच नं. प्रदेशको अहिले पनि बढी छ। मुख्यतः यी तीन क्षेत्रको विकास नै यसको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। लुम्बिनी सँगसँगै तिलौराकोट, देवदह, स्वर्गद्वारी, ठाकुरद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकियो भने समग्र प्रदेशको समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ। त्यसैले लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई लुम्बिनीमा मात्रै केन्द्रित नगरेर अन्य पर्यटकीय स्थलसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सक्नुपर्छ।
नेपालको समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार पर्यटन हो। उत्तरको छिमेकी चीन तीब्र आर्थिक विकासको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। दक्षिणको छिमेकी भारत पनि विकासको गतिमा छ। उत्तर र दक्षिणका दुबै छिमेकीको आर्थिक विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पहिलो क्षेत्र भनेकै पर्यटन हो। दुबै छिमेकीका नागरिकहरुमध्ये एक प्रतिशतले मात्रै नेपाल भ्रमण गर्ने हो भने हामीलाई त्यो संख्या धान्न हम्मेहम्मे पर्नेछ। त्यसैले नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ । तर हामीले त्यसलाई पछ्याउन सकिरहेका छैनौं। लुम्बिनी विकास गुरुयोजना शुरु भएको ४१ वर्ष भए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन नसक्नुका पछाडि यिनै प्रवृत्तिहरुले काम गरिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको विकास र विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने लक्षका साथ लुम्विनी भ्रमण वर्ष २०७६ को घोषणा गरेर सराहनीय काम गरेको छ। लुम्विनीमा २० लाख मात्र हैन त्यो भन्दा अझ बढी पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावना छ। तर न्यूनतम लक्ष राखेर अभियानको थालनी गर्नु नै उत्तम हो। हजारौं माइल लामो यात्राको शुभारम्भ एउटा पाइला अगाडि सारेरै हुने भएकोले यो अभियानको सराहना गर्नैपर्ने हुन्छ। एक वर्षको परिणाम हेरेर आगामी वर्षदेखि महत्वाकांक्षी लक्षका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा बनाउने काम भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यस क्षेत्रमा अव्यवस्थित र हचुवाका भरमा खोलिएका सिमेन्ट उद्योग तथा अन्य उद्योगधन्दाहरुले त्यहाँको वातावरण विषाक्त एवं प्रदूषित बनाइरहेका छन्। त्यसैले एउटा समय सीमा तोकेर त्यहाँका उद्योगधन्दाहरुलाई स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा लज, होटल, रिसोर्टको आवश्यकता पर्दछ। त्यस क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगको विकास गर्नुको विकल्प छैन। पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव भएकोले व्यवसायीहरुले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ।
Previous: पर्यावरणसँग सम्वन्धित दिवस र हाम्रो दायित्व
Next: योगले निरोगिता र मानवीयता जोड्दै